Deg deg: Dagaal goor dhow ka qarxay deegaanka Deefow ee gobolka Hiiraan | cowslafil news network
Posted by cowslafil On June 26, 2014 0 Comment
Dagaalkan ayaa waxaa la gu soo waramayaa in ay soo qaadeen maleeshiyaadkii sanadkii hore Qabsaday deegaanka kabxanley ee gobolka hiiraan iyadoo shacabkii kabarakacay deegaanka Kabxanleyna ay hada ku nool yihiin deegaanka hada dagaalka kabilawday.
Wararka naga soo gaaraya halkaas ayaa waxa ay sheegayaan in dhimasho iyo dhaawac Farabadan ay jirto oo udhaxeeya maleeshiyaad kala taabacsan qabaa ilada wada dega gobolka Hiiraan.
Maleeshiyaadka wata dharka ciidanka dawlada fedaraalka soomaliya ayaa waxay ku hubeysan Yihiin gaadiid farabadan oo leh astaanta dawlada fedaraalka somaliya balse waxa ay Ubababulan yihiin qaab qabiil.
Qaar kamid ah shacabka hada ladulmiyay ee deegaanadooda lagu duulay oo lahadlay radio Danan ayaa sheegayaa in galabta 3:00 galabnimo uu bilawday dagaalkaas ilaa hada lama oga Qasaaraha rasmiga ah ee dagaalkaas ka dhashay.
Previous:Daawo Axmed Diiriye: Biimaal waa masaakiin aan tabar lahayn, sida Shaanshida cad cad u galnay ayaan u galeynaa
Next: Wararkii ugu danbeeyey ee dagaalka ka dhacay degaan u dhaxeeya Deefow iyo kabxanley